AC MILAN VS BORUSSIA DORTMUND: Shaxda & safafka laga yaabo inay duhurkan kusoo galaan! – Gool FM
AC MILAN VS BORUSSIA DORTMUND: Shaxda & safafka laga yaabo inay duhurkan kusoo galaan!
Raage July 18, 2017
(Guangzhou) 18 Luulyo 2017 – Kooxda Milan ayaa ka hor inta aysan u xaydxaydan koobka kale waxay la ciyaaraysaa Borussia Dortmund oo fasalkan ciyaaraysa Champions League halka Milan ay kusoo laabanayso Yurub, balse waa koobka 2-aad ee Europa League.
Ciyaartan ayaa maanta duhurkii saacadda Afrikada bari marka ay tahay 2:20 daqiiqo ka bilaabmaysa Guangzhou oo ku taalla Shiinaha, waxayna kooxda Vincenzo Montella, doonaysaa inay bal wax uun ka ogaato tabarteeda kaddib markii ay kulankii 1-aad ay 4-0 ku tuntan kooxda Swiss-ka ah ee Lugano.
Dhanka Borussia macallinka cusub ee Peter Bosz, oo ka yimid Ajax, ayaa dareensan inuu haysto wax kasta oo uu kusoo saari karo kal-ciyaareed guuleed. Haddaba hoos ka eeg shaxaha laga yaabo ee labada naadi, waloow laga yaabo inuu Milan ka maqnaado Riccardo Montolivo oo dhaawac ka sheeganaya.
XOG: Keita Baldé Diao oo Inter Milan ku biiraya saacadaha soo socda